ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ မြ၀တီ Channel အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ မြ၀တီ Channel အကြောင်း
ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ မြ၀တီ Channel အကြောင်း
Posted by YE YINT THU on Mar 15, 2012 in Myanma News | 16 comments
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ယမန်နေ့ ညက ဒေါ်စုရဲ့ NLD ပါတီ မဲဆွယ်ဟောပြောမှု ထုတ်လွှင့်ချက်ကို မြ၀တီချန်နယ် ကနေကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ မြ၀တီ Channel ကတော်တော်လေး ထင်သာမြင်သာ ရှိတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ခန့် မှန်း အချိန် ည 9:25 လောက်မှာဒေါ်စုဟောပြောချက်က ရုတ်တစ်ရက်လိုင်းပြတ်သွားခဲ့ ပြီးနောက်တစ်ပါတီ ဟောပြောတဲ့ အလှည့်ကျမှဘဲ လိုင်းပြန်ကောင်း သွားခဲ့ပါ တယ်။
သူ့ ပါတီကိုယ့်ပါတီ အနိုင်ရရှိရေးအတွက် ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ တရားနည်းလမ်းတစ်ကျ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ကို နိုင်ငံတော်ကတောင်ခွင့်ပြုပေးတာဘဲ။ တစ်ကယ်ဆို ဒီလိုသူရဲဘောကြောင် အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့ လိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးလုံးဝ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်ပါဘူး။
အဲဒီလိုဖြတ်လိုက်လို့ ရောဒေါ်စုရဲ့ ဟောပြောချက်တွေကပြည်သူတွေထံကိုမရောက်ဘဲပျောက် ပျက်သွားမှားလား??? ဆိုတာစဉ်းစားသင့်တယ်။
MRTV4ကတော့ကောင်းကောင်းအစအဆုံးလွှင့်သွားသားပဲ။ မြ၀တီတော့မကြည့်လိုက်မိဘူး။
No MYD wave at our place, but MRTV & MRTV4 was broadcasting start to end very clearly.
မလာဘူးလို့ ရေးထားတာမရှိပါဘူး။ သတင်းကိုသေသေချာချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ခန့် မှန်း အချိန် ည 9:25 နာရီ လောက်မှာဒေါ်စုဟောပြောချက်က ရုတ်တစ်ရက်လိုင်းပြတ်သွားခဲ့
လာတယ်ဆိုတာက ပထမ်ပိုင်း ၁၀ မိနစ်စာလောက် လွှင့်ပေးပြီးမှလိုင်းဖြတ်လိုက်တာပါ။ ကျောက်ဆည်။ မြင်းခြံ။ စစ်ကိုင်း။ ပြင်ဦးလွင်။ မန္တလေးဖက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒိမီဒီယာတွေက သူတို့ ၀ါဒဖြန့်ချင်တာဆို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်…။ ကြည့်ပါလား ကိုရီးယားကားတွေ ဘောလုံးပွဲတွေကျတော့ သူတို့ဖုံးချင်ကွယ်ချင်တာကျရင်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာများတယ်………။
လူကြီးမင်း ဖမ်းယူကြည့်ရှုသောမြ၀တီချန်နယ်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ပြန်လည်ဖမ်းယူပါရှင်။
သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုင်ဆိုင်ဆိုင် ……………. ဖြစ်ရလေကွယ်။
မန္တလေးမှာ တစ်ကယ် ပြတ်သွားတာတော့ အမှန်ပါ
နောက် ပြတ်တဲ့နေရာကလည်း –
လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင် – ( ဒီနေရာတွင် MWD ရုပ်သံမှ လိုင်းပျက်သွားပါသည်။ ) ဖြစ်နေတယ်လေ။
အဲဒီတော့ ပြတ်သွားတဲ့ သူတွေက ဘာတွေးကြသလဲဆိုတော့ –
ငါးကြင်းဆီ (တပ်မတော်ပိုင် မီဒီယာ MWD) နဲ့ ငါးကြင်းကြော် (တပ်မတော်သားတွေ လွတ်တော်က ထွက်သွားရအောင် ဟောပြောတာတော့) တာတော့ မခံနိုင်ပေါင်ကွယ်။ … များလားရယ်ပေါ့လေ။
အခုလို အခြားနေရာတွေမှာ လာတယ်ဆိုရင်တော ………
“သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုင်ဆိုင်ဆိုင် …………….” ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေတယ်ကွယ်။
ဟောဒီပို့စ်မှာ http://myanmargazette.net/107953/economic-news-international-news-news-industry-people-in-the-news-us-news-news/opinions-and-discussion ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခဲ့ပြီးသားပါဗျာ…။ တောက်… ငါဒီလောက် တော်ရဲ့သားနဲ့ ဘာပြုလို့ သမဒ မဖြစ်ရပါလိမ့်…
etone says: ကျွန်မ အန်တီစုကို ကြိုက်လွန်းလို့ .. မြ၀တီကရော .. MRTV4 ကရော .. လာတာ စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ် … ။
နယ်မြေကွာလို့ထင်တယ် .. ကျွန်မမြ၀တီချန်နယ်ကြည့်တဲ့အချိန်တော့ .. အစဆုံးလွှင့်သွားပါတယ် .. အဖြတ်တောက်မတွေ့ပါဘူး … ။ လိုင်းလည်း မပြတ်ပါဘူး .. ။
အပြောကြီးသလောက် ဟောဒီပိတောက် တွေပွင့်တော့ ကြောင်ကြီး စိတ်မှာ မပျော်နိုင်တယ်။
ဟာ …. ဟ ……
ဒီတော့ ပွိုင့် ခုနှစ်သောင်း ကို ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးသူ အားလုံးကို ခွဲပေးပါ။ ;-)
မန်းဂေဇက်က မန်းလေးသူားတို့ရေ ဒီသတင်းဟုတ်မဟုတ် confirm လုပ်ပေးကြပါဦး….
ဦးကြောင်ဆီက ပွိုင့်ခုနစ်သောင်း ရန်ကုန်သူားတွေကတော့ တောင်းရမယ်။ ရန်ကုန်မှာ မပြတ်ပါ။
MDW တော့မကြည့်ဖြစ်ဘူး………MRTV4ပဲကြည့်လိုက်ပါတယ် ဗျ…
R Gyi says:
ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဘက်ကမှလိုက်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး မြ၀တီ မူရင်း Station ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မှာတော့ ရတာမှန်ပေမယ် တချို့ နယ်မြို့ တွေမှာကတော့ ပျက်နေတာဖြစ်နီုင်ပါတယ် ရာသီဥတုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ်မီးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် လာချင်လာမယ်မလာချင်မလားဘူးဆိုပြီးအာမခံ မရှိပဲလုပ်နေတာတော့ ဘယ်အချိန်မှလွတ်မြောက်မလဲမသိ
ကျွန်မ အန်တီစုကို ကြိုက်လွန်းလို့ .. မြ၀တီကရော .. MRTV4 ကရော .. လာတာ စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ် … ။
channel ကြောင့်ဘာကြောင့်ငြင်းမနေကြပါနဲ့ ။
အရေးကြီးတာက အသဲကြားကမဲတပြားကို ဧပြီလ တစ်ရက်နေ့ မှာ
ရဲရဲဝံ့ ဝံ့ သွားထည့်ကြဖို့ ပါပဲ။ ဟင် ……ငါလား ခွင့်လွတ်ကြပါ။
တိုင်းတပါးရောက်နေတယ်။ 2015 မှထည့်ဖြစ်အောင်ထည့်နိုင်ဖို့ 